Indalo ye-Asphalt ye-Organic ka "Giardini del Monferrato"
Umsabalalisi kanye nomeluleki kaPerma Zyme
Izingadi zaseMonferrato ePiria a I-Rocca Grimalda esifundazweni Alessandria osebenza emkhakheni we Umkhiqizo we-asphalt e Ukulungiswa kwemigwaqo nendlela Perma Zyme ukuthola imiphumela ebalulekile nehlala isikhathi eside.
Ukudalwa kwe-Asphalt BIO ngo "Giardini del Monferrato" - Izinsizakalo zabantu kanye namabhizinisi
Izingadi zaseMonferrato isebenza kusukela ngo-2000 ngokuzibophezela nangobungcweti ku Umkhiqizo we-asphalt ngemisebenzi enikelwe umphakathi, abantu abazimele kanye namabhizinisi. Izingadi zaseMonferrato ihlangabezana nezidingo zawo wonke amakhasimende ayo Ukulungiswa kwemigwaqo con Perma Zyme. the Umkhiqizo we-asphalt ifaka izinsiza ezahlukahlukene kubandakanya imigwaqo, imizila nezindawo ezahlukahlukene. Akunamkhawulo Umkhiqizo we-asphalt futhi kuya ku Ukulungiswa kwemigwaqo con Perma Zyme: yingakho kungcono ukuxhumana nenkampani ehamba phambili emkhakheni we Umkhiqizo we-asphalt.
Ukuqashelwa kwe-Asphalt Bio ngo "Giardini del Monferrato" - Umngani wezemvelo
Inkampani Izingadi zaseMonferrato ePiria a I-Rocca Grimalda esifundazweni Alessandria uthanda futhi ahloniphe imvelo futhi akhethe imikhiqizo yemvelo ye Umkhiqizo we-asphalt e Ukulungiswa kwemigwaqo. Indlela esetshenziswa Izingadi zaseMonferrato kunjalo Perma Zyme, isengezo esikuvumela ukuthi usebenze kunoma yiluphi uhlobo lomhlabathi ngemiphumela ebalulekile nehlala isikhathi eside uma kufikwa ku Umkhiqizo we-asphalt. Nge Perma Zyme uzoba ohlangothini oluphephile, ngisho nasezindaweni okunzima ukufinyelela kuzo.
Ukuqashelwa kwe-Asphalt Bio ngo "Giardini del Monferrato" - Asphalting andondlo
Izingadi zaseMonferrato, noma ngabe Umkhiqizo we-asphalt ngabe kunjalo Ukulungiswa kwemigwaqo, inhloso eyodwa kuphela: ukwakha imisebenzi enobungane bemvelo. Futhi iyakwenza noma ngabe isizinikezele Umkhiqizo we-asphalt futhi kuya ku Ukulungiswa kwemigwaqo. Ngenxa ukusetshenziswa kwe Perma Zyme, lo Umkhiqizo we-asphalt futhi i Ukulungiswa Komgwaqo Nezindlela kuyiphutha - kumahhala, kuyabekeka futhi manje iphuzu lesethenjwa emkhakheni we Umkhiqizo we-asphalt. Khetha okungcono kakhulu, khetha inkampani enokwethenjelwa efana ne Izingadi zaseMonferrato. Inkampani ehambisana nomgomo wokuhlonipha imvelo, kanye nesigaba IGiardini del Monferrato - Ukuqamba nokunakekela, futhi ibhekana nezingadi zomphakathi nezangasese, amapaki, amachibi nemithombo.
Ukuqashelwa kwe-Bio Asphalts ngo "Giardini del Monferrato" - Izinsizakalo ezintsha
Izingadi zaseMonferrato ePiria a I-Rocca Grimalda esifundazweni Alessandria, usebenzisa indlela yokuphayona Perma Zyme, ivumela ukwamukela isixazululo sezomnotho kakhulu, esisha kanye nemvelo ye Umkhiqizo we-asphalt e Ukulungiswa Komgwaqo Nezindlela. Ngokuzinza okungakaze kubonwe ngaphambili, i Perma Zyme, iphrojekthi ezalelwe eMelika, yisinqumo esihle kunazo zonke. Ulindeni? Ngoba Umkhiqizo we-asphalt e Ukulungiswa Komgwaqo Nezindlela, thintana nenkampani ngaphandle kokungabaza Izingadi zaseMonferrato.
Ikheli: Indawo Piria
Idolobha: I-Rocca Grimalda
I-POSTAL CODE: 15078
Ucingo: 0143 46592
Umakhala ekhukhwini: 339 5435353
Yefeksi: 0143 46160
Inombolo ye-VAT: 01992130060